Amavesi eBhayibheli - Mashi 2021 - Bazithobe abantu... - YouVersion
Posted on 2021-03-15 2021-09-17 by Tiana Krueger
Amavesi eBhayibheli – Mashi 2021 – Bazithobe abantu…
2 kuThimothewu 1:7
“Uma ngivala izulu ukuba kungabikho mvula, noma ngiyaleza isikhonyane ukuba sidle izwe, noma ngithuma isifo phakathi kwabantu bami, bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami, bakhuleke, bafune ubuso bami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi, ngiyakuzwa ezulwini, ngithethelele isono sabo, ngiphilise izwe labo.
2 iziKronike 7:13-14
ungesabi, ngokuba mina nginawe;ungapheli amandla,ngokuba mina nginguNkulunkulu wakho;ngiyakuqinisa, futhi ngiyakusiza,yebo, ngiyakusekela ngesandla sokunene sokulunga kwami.
Wozani, bantu bami,ningene emakamelweni enu,nizivalele iminyango,nicashe ngokuphazima kweso,kuze kudlule ulaka.Ngokuba bhekani,uJehova uyaphuma endaweni yakheukuba ahambele ububi babakhileyo emhlabeni;umhlaba uyakubonakalisa igazi lawo,ungabe usabasibekela ababuleweyo babo.
Kepha yilokhu engiyakukubuyisela enhliziyweni yami,ngalokho nginethemba:ngumusa kaJehova ukuthi asiqediwe,ngokuba ububele bakhe abupheli.Busha ekuseni njalo;ukuthembeka kwakho kukhulu.UJehova uyisabelo sami,usho umphefumulo wami;ngakho ngiyakwethemba kuye.
Kepha maningakhohlwa ukwenza okuhle nokuphana, ngokuba iminikelo enjalo uNkulunkulu uthokoziswa yiyo.
Yena owakhile ekusithekeni koPhezukonkenohlezi emthunzini kaSomandlauthi kuJehova: “Uyisiphephelo sami nenqaba yaminoNkulunkulu wami engimethembayo.”
Previous PostPrevious Ukulindela Ukhisimusi
Next PostNext AmaHubo 91 – UJehova ungumlondolozi